Erayadii Soo dhawaynta Madax Wayne Florentino Perez Ee Eden Hazard Iyo Dareenkii Uu Hazard Ka Bixiyay Riyadiisa Rumowday. - Gool24.Net
Erayadii Soo dhawaynta Madax Wayne Florentino Perez Ee Eden Hazard Iyo Dareenkii Uu Hazard Ka Bixiyay Riyadiisa Rumowday.
Real Madrid ayaa bandhig wayn u sameeyay saxiixa cusub ee Eden Hazard kaas oo ay Santiago Bernabeu ku soo dhaweeyeen dad 50 kun oo taageerayaal ah. Eden Hazard ayaa dhamaystiray riyadii uu waayihiisa ciyaareed ka lahaa.
Madax waynaha Real Madrid ee Florentino Perez iyo maamulka kooxdiisa ayaa hab maamuus heer sare ah ku soo dhaweeyay xidiga ay sagaalka sanadood imaatinkiisa Bernabeu sugayeen ee Eden Hazard.
Florentino Perez oo Eden Hazard ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxaa yimid ciyaartoy layaableh si uu qayb uga noqdo kooxdan, waa mid dhif iyo naadir ah. Taariikhdiidayada waxaa soo daaqay ciyaartoyda hibadan leh”.
“Waxaanu nahay Real Madrid, waxaanu doonaynaa in aanu guulo badan gaadhno. Waxaanu ku xisaabtami doonaa kooxda wayn ee uu Zidane hor joogo. Waqti dheer ayaan doonayay in aan kalmadahaas sheego, Eden Hazard waa ciyaartoy Real Madrid ah” ayuu Perez hadalkiisa raaciyay.
Florentino Perez oo Chelsea u mahad celinaya soona dhawaynaya Hazard ayaa yidhi: “Sidoo kale waxaanu doonaynaa in aanu u mahad celinayo Chelsea kuwaas oo ogolaaday in ay riyadani rumowdo. Ku soo dhawow Real Madrid, ku soo dhawow gurigaaga”.
Kalmadihii ugu horeeyay ee uu Eden Hazard sheegay ayuu luuqada Spanishka ku salaamay taageerayaasha kooxdiisa cusub kadibna waxa uu yidhi: “Waxaan doonayaa in aan ku hadlo luuqada Faransiiska sababtoo ah wali Spanish-keygu in ku filan aad uma fiicna”.
“Madax wayne waad mahadsan tahay, qoyskaygow waad mahadsan tihiin. Waxaan doonayaa in aan maaliyadan Real Madrid koobab ugula guulaysto” ayuu Hazard hadalkiisa sii raaciyay.
Eden Hazard oo farxada riyadiisa rumowday ka hadlaya ayaa yidhi: “Tani riyadayda ayay ahayd tan iyo markii aan carruurta ahaa, hadda halkan ayaan joogaa, waxa kaliya ee aan doonayaa waa in aan waqtiga ku raaxaysto”.
“Waxaan doonayaa in waqtiga aan ku raaxaysto oo kaliiya, aad ayaad u mahadsan tihiin. Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan bilawdo u ciyaarista Real Madrid oo aan koobab kula guulaysto”. Ayuu Hazard hadalkiisa sii raaciyay.